I-MERCURY TRIAD-ISITAYILE SAKHO SONXIBELELWANO LWEZOTHANDO-I-LUNAR ASTROLOGY - UKUVUMISA NGEENKWENKWEZI
Eyona Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi I-Mercury Triad-Isitayile sakho soNxibelelwano lwezothando
Udinwe ukudibanisa kunye nama-cuties avela kwi-Bumble - kuphela ukuba incoko ibe buthuntu? Ngaba ukulungele ukufumana iqabane elinokuqonda isimbo sakho sonxibelelwano esisodwa? Kungaba lixesha lokufunda ngakumbi malunga ne-Mercury Triad yakho kunye nendlela echaphazela ngayo unxibelelwano lwakho. I-Mercury Triad yakho ibhekisa kumandla adibeneyo ...
UkuthandanaNge-2 kaJuni ngo-2021
Udinwe ukudibanisa kunye nama-cuties avela kwi-Bumble - kuphela ukuba incoko ibe buthuntu? Ngaba ukulungele ukufumana iqabane elinokuqonda isimbo sakho sonxibelelwano esisodwa? Kungaba lixesha lokufunda ngakumbi malunga ne-Mercury Triad yakho kunye nendlela echaphazela ngayo unxibelelwano lwakho. I-Mercury Triad yakho ibhekisa kumandla adibeneyo eLanga, iMercury, kunye neVenus ukubekwa kwitshathi yakho yokuzalwa . Ezi ndawo zintathu zenza isiseko sesimbo sakho sonxibelelwano sothando.
Le trio yokubeka iphantse ifumaneke ijikeleza enye kwenye - ngenani eliqingqiweyo loqwalaselo ezinokuvela kwitshathi yokuzalwa. Kwaye kunokwenzeka ukuba ubone izinto ezinkulu zothando kwitshathi yakho yokuzalwa ejongene nezi planethi zintathu. Amandla abo adityanisiweyo angasibonisa izinto ezifana nolwimi lwethu lothando, ubuntu bethu bothando, nokunye okuninzi.
Uyifumana njani iMercury Triad yakho kwitshathi yakho yokuzalwa
Uya kufuna izinto ezintathu ukufunda itshathi yakho yokuzalwa kwaye ufumane i-Mercury Triad yakho: ixesha lakho lokuzalwa, indawo yakho yokuzalwa kunye nosuku lwakho lokuzalwa. Emva kokuba ufumene olo lwazi unako sebenzisa esi sixhobo ukusuka abahlobo bethu kwi-Astro-Charts ukufumana itshati yakho yokuzalwa yasimahla:
I-AFFILIATE DISCLOSO: iwijethi enikezelwe ngasentla kweSIXHOBO SAMAHHALA. Ukuba ukhetha ukuthenga ingxelo ehlawulweyo nge-Astro-Charts.com; Ndingafumana ikhomishini yomanyano. Intlawulo ayifunyanwa ngathi. Nceda uqhagamshelane admin@astro-charts.com ngemibuzo.
Emva kokuba unetshathi yakho, fumana indawo yakho yeMercury Triad (iLanga, iMercury, kunye neVenus.) Uya kuba neendawo ezintathu ezahlukeneyo kunye nomqondiso wezodiac ohambelanayo ngamnye. Iya kujongeka ngolu hlobo:
ilanga / inyanga ephumayo indibaniselwano
Zimela ntoni iiplanethi ezikwiMercury Triad yakho?
Xa kufikwa kwiiplanethi zobuqu kwi-Astrology - akukho kubekwa kwindawo ezintathu njengeqhina eliqinileyo njengeLanga lakho, iMercury, kunye neVenus. Ngenxa yokuba kufutshane kwi-orbit yeLanga, iMercury okanye iVenus ayinakuze iphambukele kude enye kwenye. I-orbit yeMercury kunye neVenus zihlala zidibana neLanga. Ngesi sizathu, iLanga lakho, iMercury kunye neVenus uphawu luya kuchitha uninzi lobomi bakho kwindawo ekufutshane.
Umqondiso wakho weLanga-Imvakalelo yokuZizazisa
Umqondiso wakho weLanga yinxalenye yobuntu bakho obuchitha ixesha elininzi kwindawo ebonakalayo. Ibonisa ukuzichaza kwakho, iziko le-ego, kunye nalapho ukhanya khona ngokwemvelo ebomini. Ukuhambelana okusisiseko phakathi kwemiqondiso yelanga yabantu ababini luphawu lokuba nobudlelwane bendalo omnye komnye. Ubona umoya ozalanayo omnye komnye, niyaqondana. Oku kubekwa kokona kunamandla ngaphakathi kweMercury Triad kwaye uya kufumana amandla eMercury yakho kunye neVenus ephenjelelwa kakhulu kukubekelwa kwelanga - kwaye hayi ngenye indlela.
Xa iLanga kunye neMercury zidibanisana ngumzuzu wokwazi. Amandla adityanisiweyo ezi planethi enza ukuba unxibelelwano nomnye umntu lubonakale luyinto yesibini kuwe. Kwaye xa kudityaniswe nokubekwa kwakho kweVenus kunokubonisa okuninzi malunga nendlela onxibelelana ngayo nomnye umntu obalulekileyo. Ngelixa iVenus Triad yakho (i-Ascendant / Venus / Mars) inokukubonisa okuninzi malunga nendlela odlala ngayo kwaye utsale iqabane lakho - iMercury Triad (iLanga / iMercury / iVenus) ibonisa indlela isibini sakho esinxibelelana ngayo xa inqanaba lehoneymoon liphelile.
Uphawu lwakho lweMercury-uNxibelelwano kunye nobukrelekrele
Izikhundla ezikhethekileyo zeMercury:
Indawo yokuhlala: Gemini kunye neVirgo
Ukunciphisa: Sagittarius kunye neePisces
Unxibelelwano sisivumelwano sokwenza okanye sokuqhawula xa kufikwa kubudlelwane. Imiba ejongene neMercury ingabonisa indlela onxibelelana ngayo wena kunye neqabane elinokubakho. I-Mercury ilawula ingqondo, kwaye uphawu lwakho kunye nendawo yendlu ichaphazela ukusebenza kwangaphakathi kwengqondo yakho. I-Mercury ichaphazela unxibelelwano kunye namazwi athethiweyo. Ibonisa indlela esilibona ngayo ihlabathi kwaye ibonisa indlela esifunda ngayo kwaye siqhuba ngayo ulwazi. Kubalulekile ukuba neqabane elinokuthi liqonde ukuba kutheni kwaye kutheni unxibelelana ngendlela owenza ngayo.
Ukuthelekisa amandla kwiindawo zakho zokubeka iMercury kuya kukunceda wena kunye neqabane lakho nibone ezona ndlela zilungileyo zokunxibelelana omnye nomnye. IMercury yakho ayinakuze ibe ngaphezulu kwe-28 ° ukusuka eLangeni kwiVili lakho leZodiac. Oku kuthetha ukuba iMercury yakho iya kuba kuphawu phambi kweLanga lakho, uphawu olufanayo neLanga lakho, okanye uphawu lwakho emva kweLanga lakho.
Uphawu lwakho lweVenus-Uthando kunye nomtsalane
Iindawo ezikhethekileyo zeVenus:
Indawo yokuhlala: Taurus kunye neLibra
Umonakalo: iScorpio kunye ne-Aries
I-Venus yiplanethi yothando kwaye ichaphazela zonke izinto ezintle, kunye nokuzonwabisa (ingakumbi ukwabelana nabanye). Nantoni na ejongene nobudlelwane bexesha elide, umtshato, kunye nokuthandana unokufumana impembelelo yayo kwiVenus. IVenus yakho ibonisa indlela enitsala ngayo nobabini kwaye nibonise uthando nexabiso kubudlelwane benu. Ngokujonga ukuba loluphi uphawu oluwela kwiVenus yakho, unokufumana ukuba uluhlobo luni lweqabane lothando, kunye nohlobo lomntu omtsalayo. IVenus inokunika ingqiqo kwinto oyixabisileyo kwiqabane, isitayile sakho kunye nobuhle, kunye nendlela obonisa ngayo kwaye ufune uthando kubudlelwane.
Kwi-Astrology, uphawu lwakho lweVenus lusondele kulwimi lwakho lothando njengoko lufika xa kufikwa kufundo lwetshathi. Lo mhlaba uya kudlala indima enkulu kubudlelwane bakho bothando kunye nexesha elide. IVenus yakho ayinakuze ibe ngaphezulu kwe-48° kude neLanga lakho. Oko kuthetha ukuba iVenus yakho iya kuba kwenye yemiqondiso emibini phambi kweLanga lakho, uphawu olufanayo neLanga lakho, okanye enye yeempawu ezimbini emva kweLanga lakho.
Yonke indibaniselwano yeMercury Triad icacisiwe
Nantsi ukujonga kuyo yonke indibaniselwano yeMercury Triad kunye nokuba ithetha ukuthini na enye yazo. Khumbula – ezi ziinkcazelo nje jikelele. Ukusebenzisa ulwazi oluvela kwitshathi yakho yokuzalwa ekhethekileyo kuya kukunika umbono ocacileyo we-Mercury Triad yakho.
Ilanga, iMercury, kunye neVenus zonke zikuphawu olufanayo
Xa zonke iiplanethi ezintathu kwi-Mercury Triad yakho ziwela phantsi kophawu olufanayo, oko kuthetha ukuba kukho intambo efanayo phakathi kwentetho yakho yangaphandle, ukuthanda kwakho kunye nentliziyo yakho. Abantu abane-Ascendant yabo, iVenus, kunye ne-Mars kuphawu olufanayo banomqondo ocacileyo wobuqu kunye nendlela echaziweyo ebomini - kodwa inokuba ngumqondiso wobuntu obunenkani. Kwakhona, amandla aziswa ngokuba neLanga lakho, iMercury, kunye neVenus kuphawu olufanayo aya kwahluka kakhulu kuxhomekeke ekubeni zeziphi iimpawu kunye nezindlu ezo planethi ziwela kuzo.
Ilanga kunye neMercury kuphawu olufanayo, iVenus kuphawu olwahlukileyo
Xa i-Ascendant yakho kunye ne-Mars zikuphawu olufanayo oko kuthetha ukuba unxibelelana ngokucacileyo ngamandla apheleleyo olo phawu ekwabelwana ngalo. Ikhonkco phakathi kweziko lakho le-ego kunye nendlela oqhuba ngayo ulwazi ilungelelaniswe - nto leyo eya kuba nefuthe kakhulu kwizakhono zakho zokunxibelelana. Okwangoku, iVenus yakho ibonisa indlela othanda ngayo ukuthandana kunye nento oyithandayo ngokwemvelo ebomini. Ngokuxhomekeke kuluphi uphawu iVenus yakho ekuyo, le mpembelelo yeplanethi yesithathu inokomeleza okanye yenze buthathaka ezinye iindawo.
Ilanga kunye neVenus kuphawu olufanayo, iMercury kuphawu olwahlukileyo
Xa iLanga kunye neVenus zikuphawu olufanayo, oko kuthetha ukuba intlalontle yakho ilungelelaniswe ngokugqibeleleyo. Umdibaniso we-Sun-Venus wenza ukuba umntu abe nomtsalane ngokwemvelo kwaye abe nobubele, uhlobo lomntu onokuvana naye nabani na odibana naye. Luluphi uhlobo lwentlalo yoluntu oluthathayo luya kuphenjelelwa ngoluphi uphawu olwabelwanayo onalo kwiLanga lakho kunye neVenus. Ngeli xesha, i-Mercury yakho ibonisa indlela oluthatha ngayo ulwazi, ukucinga ngengqondo iimeko, kunye nokunxibelelana nabo bakungqongileyo. Kanye njengangaphambili, le mpembelelo yeplanethi yesithathu yeMercury inokomeleza okanye yenze buthathaka ezinye iindawo ngokuxhomekeke kuluphi uphawu ewela kulo.
IMercury kunye neVenus kuphawu olufanayo, iLanga kuphawu olwahlukileyo
Umntu oneMercury kunye neVenus kuphawu olufanayo unokuba ngumngeni onomdla. Ngenxa yokuba iLanga lelona qela linempembelelo kwi-Mercury Triad yakho, olu lungelelwaniso lunamandla okudala ukungavisisani kwitshathi yokuzalwa. Bavame ukuba intellectualize iimvakalelo zabo kude (ingakumbi ukuba le miqondiso kuwa eLibra, Gemini, okanye Aquarius) okanye mhlawumbi bazifumane belahlekile nzulu kakhulu emanzini iimvakalelo ukuba le miqondiso iwela Pisces, Scorpio, okanye Cancer. Babeka umngcipheko wokuzama ukulungelelanisa enye yezinto ezimbalwa kweli hlabathi ezingenangqondo (uthando) kunye nokuphulukana neemvakalelo zabo. Nangona kunjalo, ukuba iLanga lakho likuphawu oluncomekayo kwiMercury kunye neVenus yakho inokubonisa umntu onengqiqo ephucukileyo yonxibelelwano kunye nobukrelekrele beemvakalelo.
Ilanga, iMercury, kunye neVenus zonke zineempawu ezahlukeneyo
Xa iLanga lakho, iMercury, kunye neVenus zonke zikwimiqondiso eyahlukeneyo inokukhomba ukunqongophala kwemvisiswano kwitshathi yakho yokuzalwa. Ezi ndawo zintathu ziya kuhlala ziziva ngathi zilwa ngokuchaseneyo ukuze uzihoye. Ngomzuzu omnye unokuziva ngathi uphawu lwakho lweVenus lulawula i-roost kwaye ngomzuzu olandelayo iMercury yakho ityibilike kwisitulo somqhubi. Kwakhona, kunokwenzeka ukuba ube nexesha elilula ngolu lungelelwaniso ukuba imiqondiso emithathu yezodiac ezi planethi ziwela ekuncomaneni.
Ingaba iMercury Triad yakho iyichaphazela njani into yothando?
Eyona ndlela ilungileyo yokwenza oku kukuthelekisa ngokuthe ngqo iMercury Triad yakho neyeqabane lakho. Nalu ushwankathelo olukhawulezayo lwendlela yokwenza oko:
1.) Qala ngokujonga indlela ezakho iMercury Triad ezibekwa ngayo zisebenza kunye kwitshathi yakho - ingaba iLanga kunye neVenus ziyahambelana kakuhle? Ingaba unazo zontathu iindawo ezikuphawu olunye? Ziphi iindawo zongquzulwano phakathi kweMercury Triad yakho? Eli nyathelo libalulekile ekuziqondeni. Ngaphambi kokuba uthelekise iitshathi kunye nokutyumza kwakho - uya kufuna ukwazi ukuba iiplanethi zakho kunye nemiba isebenza njani ngaphakathi kwevili lakho lokuzalwa.
2.) Okulandelayo, jonga ukubona ukuba ukubekwa kwakho kweMercury Triad kuyahambelana neMercury Triad yeqabane lakho - Qala ngokujonga ukuhambelana kweempawu zakho ngakunye (iLanga vs. Ilanga, iMercury vs Mercury, iVenus vs. Venus). Nikela ingqalelo kuphawu lwezodiac kwaye izindlu ezi ndawo zibekwe kuzo ziwela kuye ngamnye wenu. Ezi ziya kukunika umxholo owongezelelweyo wokufumana ukuhambelana kwakho.
3.) Kwaye ekugqibeleni, jonga imiba eyenziwe phakathi kweMercury Triads yakho - ingaba kukho nayiphi na imiba ebalulekileyo phakathi kweempawu zakho zeVenus ezikhomba ubudlelwane bexesha elide? Ezi zezona nxalenye zibalulekileyo kwi-synastry kuba imiba yakho ibonisa ukuba yeyiphi imixholo ephambili oya kujongana nayo ebomini bakho. Bangabonisa ngokucacileyo ngakumbi amathuba okuba ubudlelwane bakho buya kusebenza kwixesha elide.
Unomdla wokufunda ngakumbi malunga nokuvumisa ngeenkwenkwezi kunye nokuhambelana kwezothando? Jonga ukugqiba kwethu isikhokelo ekufumaneni iVenus Triad yakho kwaye kuthetha ntoni kulwalamano lwakho olulandelayo.
ukuchetywa kweenwele zamadoda kuyaphela emacaleni
ukucheba iinwele zamadoda
indlela yokuxela ukuba yintoni uphawu lwakho lwezodiac
iinwele zomfo onebunzi elikhulu
iinwele ezimfutshane asian oyindoda
ukucheba iinwele zamakhwenkwe